· Multifunctional - Mila différant huile essentielle Mila Ceramic dia mampiditra diffuser aromatherapy sy jiro alina amin'ny iray.
· Famolavolana voajanahary sy minimalista - fonosam-bakoly vita amin'ny tanety vita amin'ny volon'ondry tsara tarehy, afaka mifangaro tsara amin'ny haingon-trano rehetra, izay mahatonga azy io ho safidy tsara amin'ny fanomezana miavaka.
· Fahazoana 180ml - asio menaka esansiela 5-10 ao anaty fitoeran'ny rano, afangaro hatramin'ny 8 ora mitohy na 18 ora mitsivalana.
· Namboarina ho an'ny Light Sleeper: alim-pandrefesana haavo haavo 2 ary hazavana miaina. Ny fiasan'ny mpanampy amin'ny torimaso dia hanidy ny jiro ho azy aorian'ny antsasak'adiny. Ny jiro sy ny diffuser amin'ny alina dia afaka miasa misaraka. Diffuser dia tsy manao bip konsol mahasosotra.
· Ahitana fonosana: ny Diffuser dia manana adapter mahery 6.2 ft, boky torolàlana ho an'ny mpampiasa ary torolàlana ho an'ny mpampiasa haingana.
maodely maivana kokoa, manjavozavo, mifoka rivotra
Fahaizana mandeha amin'ny rano
Boaty boaty (12Pieces)
SP-L28 300ml seramika bluetooth bluetooth APP mifehy ultrasonic ultrasonic diffuser
SP-G14M 100ml famantaranandro multifunctional famantaranandro ultrasonic manamora
SP-USB11 120ml Mahafatifaty endrika endrika solika tena ilaina USB Aromatherapy Diffuser